5 sharci oo isku daraya gunti, shaati iyo suud | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | nololeedka, Isbeddellada
Ma qiyaasi kartid sida ay muhiimka u tahay xiro shaati oo shaati ah illaa intaad xaaladda ka galeyso, waana xulashada isku dhafka ka shaqeynaya isku xirnaanta u dhaxeysa xarig, shaati iyo suud, inbadan oo naga mid ah waxay keeneysaa caqabad weyn. Taasina ma ahan mid adag, kaliya waa inaad raacdaa dhowr xeerarka aasaasiga ah inuu ku dhufto 100%.
1 5 xeerar aasaasi ah oo ay tahay inaan raacno
1.1 Marka hore, xulo dharka
1.2 Had iyo jeer shaati naqshadaysan, oo leh xargo caadi ah.
1.3 Daabacaad ballaaran oo daabacan yar.
1.4 Muhiimadda wadajirka iyo kala duwanaanta.
1.5 Miisaaniyadu waa muhiim
2 Isku-xidhka aasaasiga ah
3 Sida loo xidho suud cawlan
3.1 Shaati buluug khafiif ah iyo xarig midab leh oo faraxsan
3.2 Isku darka daabacadaha iyo bannaanka: shaati cad
3.3 Shaati madow
3.4 Shaati gaduud
5 xeerar aasaasi ah oo ay tahay inaan raacno
Markaad isku daraysid xargaha shaati iyo suud waxaa jira tiro xeerar aasaasi ah oo ay tahay in la raaco iyo in aan si faahfaahsan hoos ku qoran:
Marka hore, xulo dharka
Uma baahnid inaad guriga ku bilowdid saqafka, waxaanan kuu sheegayaa tan, sababtoo ah marar badan, waxaan dhex marnaa dukaan, xarig ayaa na soo jiita, oo maxaan qabannaa? Waan iibsanaa! Cillad haddii aanaan ogeyn waxa aan isku dareyno, ha ku dhicin damaca aad ku iibsaneyso.
Marka hore dooro suudka, ka fikir inuu cawl yahay madow, ka soo bixi qolka sariirta oo sariirta dul dhig, markaa dooro shaatiga jaakaddana hoos dhig. Haddii aadan jeclayn iskudhafka, dooro shaati kale oo midab kale leh iskuna day midab kale. Tusaale ahaan, haddii aad dooratid shaati buluug khafiif ah oo leh suudkan, xarka ku habboon wuxuu noqon doonaa mid buluug buluug ah ama maroon casaan ah.
Sshaati mar walba daabacan, oo leh xarig cad.
Haddii, tusaale ahaan, suudhkaagu u qaabaysan yahay xariijimo ama laba jibbaaran, ha iloobin inaad had iyo jeer xidhato shaati caadi ah iyo xarig, midab keliya ah.
Daabac weyn oo daabac yar.
Haddii aad doorato, tusaale ahaan, suudh ka kooban hal midab, sida buluug mugdi ah ama madow, dooro shaati leh diillimo wanaagsan oo buluug ama cadaan ah oo siinaya taabasho asal ah isku-darka. Tan, ha ilaawin inaad ku xidhato xarig midab keliya ah ama haddii aad doorato xarig qaab leh, taasi waa tusaale ahaan silsilado ka ballaadhan kuwa shaatiga. Had iyo jeer raac qaanuunkan daabacaadda yar oo leh far waaweyn iyo kan kale.
Muhiimadda wadajirka iyo kala duwanaanta.
Isku-darka midabka waxaa laga helaa raadinta wadajirka dharka raadinaya dhulka dhexe. Caadi ahaan isbarbardhiga abuuraan isafgarad iyo midabyo isku dheellitiran oo dejiya ka soo horjeedka. Hadaad mid leedahay maqaarka khafiifka ah, shaati buluug iyo buluug midab khafiif ah ayaa si fiican kuugu habboonaan doona, liddi ku ah haddii aad mid leedahay maqaarka rosier, cagaarka ayaa sifiican adiga kugu habboon. Dhamaan kuwa haysta midab madow, waxaad dooran kartaa midabyo ballaaran oo ballaaran.
Miisaaniyadu waa muhiim
Shanaad, xakamee waxaad qarash gareyso. Haddii aadan haysan miisaaniyad badan, soo iibso midabbo muhiim ah iskana dhaaf daabacadaha iyo midabyo dhalaalaya, suudhadhka midabada aasaasiga ah sida madow, cawl ama buluug ayaa kaa caawin doona maalintaada ilaa maanta, waxay yihiin asal labis wanaagsan oo aad u fudud in la isugu daro midabyo kala duwan oo shaati iyo isku xir ah.
Xusuusnow in sida caadiga ah, isku-darka ugu fiican ay yihiin:
cunt funaanado qaabeysan, xiriiro midab adag.
cunt shaati caadi ah, hal midab leh ama isku xirnaan qaabaysan.
Isku-xidhka aasaasiga ah
Una xarig madow Waxay ku habboon tahay dhar madow iyo shaati cad, haa, ha ku darin shaati madow.
Una caddaan, fool-maroodi ama xarig-caddaan ka baxsan, way istaagi doontaa wax aad u yar haddii aad gashato shaati cad.
Una xarig casaan ah Waxay ku habboon tahay shaati cad ama buluug buluug ah iyo suudh cawlan.
Una Xadhig cas Isku dar shaati cad, buluug iyo buluug fudud.
Una xarig oranjo ah Waxay umuuqataa mid aad ufiican shaati liin ah, cad ama buluug ah.
Una xarig buluug ah waxay la jaanqaadaysaa shaati buluug ah oo isku mid ah ama codad fudud, iyo sidoo kale shaati cad.
Una xarig cagaaran waxay la soo bixi doontaa shaati cad, madow ama cagaar leh codad fudud.
Miyaad maskaxda ku haysay xeerarkan markii aad isku daraysay xarig?
Sida loo xidho suud cawlan
Had iyo jeer ma sahlana Xullo shaati, suud iyo khad isku dhafan, taasoo keentay in iswaafajin dhameystiran.
8 tilmaamood oo qaabka loogu talagalay xirashada suud
Waxaan hoos ka arki doonnaa tusaalooyin si loo isku daro lebbiska iyo shaarka oo leh dhar cawlan:
Shaati buluug khafiif ah iyo xarig midab leh oo faraxsan
Waxa ugu horreeya waa in la doorto suudhka cawl. Waxay noqon kartaa, tusaale ahaan, suud jilicsan oo qurux badan, oo ku jira codad mugdi ah, oo ka samaysan maaddo la mid ah flannel. Waxaan dul saari doonaa sariirta ka dibna waxaan dooran doonaa shaati. Waxaan isku dari doonaa shaatiyada, oo aan ku dul dhejineynaa suudka, illaa aan ka helno mid ku habboon. Tusaalaha wanaagsan wuxuu noqon karaa shaati buluug khafiif ah.
Waqtiga ayaa la gaadhay xarkaha, waa maxay ikhtiyaarka ugu fiican ee suudh mugdi madow ah iyo shaati buluug khafiif ah? Waxaa jira waxyaabo kala duwan oo iskuxidh ah oo kaladuwan: casaan iyo liin dhanaan waa kuwo firfircoon oo faraxsan, waxayna si aad ah isugu eekaan doonaan. Khamriga casaanka ama buluugga buluugga ah ayaa sidoo kale noqon kara xulasho wanaagsan.
Isku darka daabacadaha iyo bannaanka: shaati cad
Suudh la hubiyey ama xariijimo ah ayaa si fiican ula socon doona shaati cad oo cad. Aynu tusaale u soo qaadanno in aan ku dooranay suud cawlan oo ku yaal fagaarayaasha waaweyn. Suudhkan, shaati midab keliya leh ayaa noqon doonta ikhtiyaarka ugu fiican, ama ugu badnaan laba jibbaarane, oo u dhow kuwa aan la aqbali karin. Tusaale ahaan, shaati cad.
Marka loo eego xarkaha, waxay la mid tahay shaatiga. Maaddaama suudku yahay mid jilicsan, xariggu waa inuu noqdaa mid hal nooc ah; tusaale ahaan, hooska xarrago leh ee casaanka.
Ikhtiyaar kale oo aad u qurux badan oo loogu talagalay dharka cawl waa shaati madow, inkasta oo ay noqon doonto xulasho aad u xiiso badan. xaaladaha rasmiga ah iyo shirarka ganacsiga.
Shaatigani wuxuu sifiican ula socdaa midabada kala duwan ee cawl, laakiin waxay ka sii muuqan doontaa wax ka badan kiiska suudhka khafiifka ah.
Waa isku darka ugu geesinimada badan. Waxaa jira dhowr midab oo casaan ah, laga bilaabo mid firfircoon oo aad u soo jiidasho leh, illaa guduud iyo gubasho guduudan. Sidoo kale Waa ikhtiyaar wanaagsan in lagu daro waxyaabo kala duwan oo shaati ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » 5 sharci oo isku dhafan xarig, shaati iyo suud
63 faallooyin, ka tag taada
Maqaal ay kugula talineyso inaad xirato xarig madow oo leh dhar madow oo ka baxsan heerka munaasabadda (dhimashada) ayaa ka maqan dhammaan qallafsanaanta iyo halista.
Fasal yeesho dijo
Nabadeey AAJJ, ma ahan inay sidan ahaato xagjirnimaduna waligeed fiicneyn. Suud madow oo wanaagsan oo leh shaar cad ama midab kale oo khafiif ah iyo xargo wanaagsan, ayaa ku habboon munaasabad gaar ah, waa inaad aragtaa isbeddellada xilligan Dayrta-Jiilaalka soo socda 2012-2013 waadna arki doontaa inay sidaas tahay 🙂
Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga!
Kaliya waxaan haystaa suud madow habeenkii, waxaanan u hayaa bandhig jaamacadeed, oo u baahan soo bandhigid rasmi ah, miyay fiicnaan laheyd inaan xirto shaati cad anigoon jaakada wadan, mise waa wax aad loogu baahan yahay? Waa maxay isku xidhka aad ku talinayso? Mahadsanid iyo mahadsanid
Jawaab Dylan Sánchez
Mukhaadaraad Narcotik dijo
iyo xarig qaanso? ma isla xeerarka midabka ayaa lagu dabaqayaa?
ps: Waxaan u dhigmaa suudhka madow, shaati cad iyo xarig madow; qurux badan oo aan macquul ahayn (isla globes dahabi ah ama abaalmarino Oscar ah)
Ku jawaab xariif Narcotik
Hal xikmad badan! Runtii isla sharcigaas ayaa quseeya xirmooyinka sujuudi 🙂 Aad baad ugu mahadsan tihiin inaad faallo bixisaan !! :)))
Waxaan leeyahay maqaar aad u madow, midabyada shaadhka ah maxaad igula talineysaa inaan xirto, ma jecli lahaa inaan marwalba xirto shaati cad, shaki kalena jaakad buluug ah, hadh kasta, waxaa lagula talinayaa wiilka sida mugdiga ah aniga ama had iyo jeer waa inaan doortaa waxa ugu ammaansan sida suudhka cawlan. Mahadsanid.
Waaye Javier! Shaatiyada khafiifka ahi had iyo jeer way kugu habboonaan doonaan. Maaha inay cadaan noqdaan, waxaad ka dooran kartaa midabo badan sida jaalle, buluug, casaan, iwm. Sida suudhadhka, waad ku dhiiran kartaa midab, inkasta oo mid cawl had iyo jeer kugu habboonaan doono adiga 🙂 Waad ku mahadsan tahay aqrintayada !!
Mahadsanid ! Shayga aad sugaysay Runtii waxtar ayey noqon doontaa
Mahadsanid !!!! 🙂
Sxb sidee tahay, waxaan aroos ku hayaa maalmo yar kadib waxaan soo iibsaday suudh cawlan oo vdd waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro liza purple tie laakiin anigu garan maayo shaati noocee ah.
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto
Jawaab si dielectricjventas@hotmail.com
Noocyada isku dhafan, dooro shaati cad ama mid fudud maxaa yeelay waxa soo jiidan doona dareenka ugu badan ayaa noqon doona xarigga tanina waa inay noqotaa halyeeyga! 🙂
Farshaxanada qaar waxay xirtaan shaati madow iyo xarig madow. Waxaan sidoo kale arkay iyaga shaati buluug ah oo qafiif ah oo leh xarig cad, suud madow. Waa caadi? Mahadsanid.
Jawaab Luciano Orellana Caldera
Hubaal waa caadi! waxay kuxirantahay dhadhanka iyo xaaladaha 🙂
Haye, sidee tahay waxaan ubaahanahay inaan isku daro suudh cirro ah iyo shaar madow, kaliya ma garanayo midabka ay ku xirnaan doonto xariggu, waa qalin jabinta, waxaan rajaynayaa inaad i caawin karto, mahadsanid.
Jawaab Leonardo Velazquez
Xadhig cawlan, kaamil ah!
Pau Wadaadka López dijo
Ujawaabi Pau Pastor López
Suudh madoow ah, midabkee leeg oo shaati ah iyo shaati ayaa la isku dari karaa (oo aan ka ahayn shaatiga cad ee quraafaadka leh ee madow?
Ku jawaab RVt
Suudh madow, waxaad xidhan kartaa gunti casaan ah, waxay umuuqataa mid hagaagsan 🙂
jhonatan castle dijo
Maqaal aad u wanaagsan Mahadsanid !!! 😀
Ku jawaab jhonatan castillo
Waad salaaman tahay, waxaan doonayay inaan ogaado haddii shaati guduud ah oo ka samaysan suud buluug ah iyo maqaarka cad ay tahay fikrad xun, haddii ay tahay fikrad wanaagsan (taas oo sida muuqata aan ahayn) kiishka aan isku dari karo? Mahadsanid
Jawaab Sergio Ramírez
Haye! Maaha fikrad aad u wanaagsan, waxa ugu fiican ayaa noqon doona in lagu daro xarig midabkiisu yahay casaan cirro leh ama fool-maroodi white
Waa salaaman tahay, waxaan haystaa suud madow oo maqaarkayguna waa bunni, waxaan jeclaan lahaa inaan xidho gunti xariijimo oo buluug ah oo leh khadad cagaaran oo mugdi ah. Waan jeclahay kan sida ay ula socoto midabka muraayadayda (cagaar madow).
Waxa aan go’aansaday waa midabka shaatiga. Waxaan is idhi malaha shaati caadi ah oo cagaar khafiif ah leh laakiin ma hubo.
Aad baan u qadarin lahaa talo, salaan.
Jawaab Manu Varela
Isku day shaati midabkiisu yahay midab beige ama mid cad ah ige
Shaati noocee ah ayaan isku daraa surwaal madow iyo jaakad beish ah
Shaati madow ama cadaan ah, kabahana waa inay ahaadaan wax badan ama kayar codka jaakada, hadii kale waxaad moodaa inaad sifiican u labisatay ilaa aad ka gaartid jaakada oo aad dhigatid mida ugu horeysa ee aad aragtay. Nasiib iyo)
Waxaan ka fekeri karaa shaar madow ama caddaan ah, kabahana waa inay ka badnaadaan ama yareeyaan codka jaakadda, haddii kale waxay u muuqan doontaa inaad si wanaagsan u labbisatay ... illaa aad ka gaadho jaakadda, oo aad xidhanayso midka ugu horreeya ee aad arkay. Nasiib!
Ku jawaab César Velázques
Haa haa runtii !!
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa suud cad oo dhan, mana aqaan shaati iyo xarig aan isku daro habeenkii
Ku jawaab Lainer
Noloshayda oo dhan waxaan doonayay suud cad oo lagu daro shaar madow, ama cawl, ama cirka buluug ah.
hello… Waxaan ubaahanahay inaan ogaado shaatiga iyo xarka aan isku daro hadii waxa aan doonayo inaan xirto ay yihiin surwaal madow oo jaakad cawlan leh… waa aroos… mahadsanid
Shaati ku jira tones casaan ah iyo xarig buluug ama cagaar ah 🙂
ah ok, iyo kabaha midabkee ayaa fiicnaan lahaa ???
Shaati noocee ah iyo xirmo aan heli karaa haddii aan ahay Caucasian oo ku lebbisan dhar jilicsan oo qaniinyo madow ah?
Shaati midab khafiif ah leh iyo xarago cajiib ah 🙂
Cumar MG dijo
Waad salaaman tahay, ma kugula talin kartaa isku darka, waxaan hayaa suud buluug cadaan ah waxaanan rabaa inaan ku xidho shaati cad, midabka caynkee ah ayaa lagugula talinayaa? Anigu waxaan ahay shuruud bunni khafiif ah ama midab kale oo shaati ah ayaa sifiican ugu eegi doona suudkan, aad baad ugu mahadsan tihiin hore!
Ujawaab Omar MG
Xadhig mugdi ah oo ku jira codadka buluuga ah ayaa qumman doona 🙂
Waxaan hayaa surwaal cadaan ah iyo jaakad khafiifa oo khafiif ah, shaati noocee ah ayaan ku dhejin karaa isaga iyo kabihiisa?
Jawaab José García
Ma xuma haba yaraatee 🙂
Waad salaaman tahay, waxaan heystaa aroos bil gudaheed runtiina anigu ma jecli xirashada xarig, waan jeclahay laakiin ma ahan tan aan ugu jeclahay, marka la soo koobo waxaan qorsheynayaa inaan xirto xarig buluug ah oo buluug ah oo leh xarig cawlan, maxaa Suudka midabku wuu fiicnaan lahaa?
Ku jawaab kriz
Maxay fiicnaan laheyd haddii uu xirto dhar midabkiisu cawl yahay: oo leh shaar cad iyo xarig madow, shaati cad iyo xarig midabkiisu yahay guduud? ama ikhtiyaarradee ayaa sifiican ufiican?
Waxay sameynayaan gabadheyda shan iyo tobnaad sanadood mana aqaano waxa aan xirto labiskeeda oo casaan noqon doona waxaan kafekeray suud beige, shaati madow iyo xarig madow iyo casaan ah, waad isiin kartaa talo .
Ku jawaab Carlos Hernandez
hello, maalinta sabtida ah waxaan leeyahay xaflad waxaan iibsaday suud madow waxaanan haystaa xarig dahab ah ... midab noocee ah ayaan xiran karaa oo aan madow ama casaan aheyn?
Waad salaaman tihiin. Sabtida waxaan leeyahay xaflad waxaanan iibsaday suud madow ... iyo xirasho dahab ah ... maxaa midab shaadh ah oo aan xidhan karaa oo aan ahayn madow ama casaan ... fadlan ... waan madow
Ren bejarano dijo
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa chorsss cagaaran iyo badhamada yaxaasyada qaarkood, waxaan rabaa inaan ugu isticmaalo jaakad caag ah, xirasho ama shaati, ma igula talin laheyd.
Jawaab si aad uhesho bejarano
SALAAN FARXO HABEENKA, waxaan qarka u saaran yahay inaan soo bandhigo shahaadada shahaadada sharciga, waxaan jeclaaday suud madaw, waan ku qanacsanahay hadii aad iga caawiso inaan ku daro midab kale oo aan cadayn, waad ku mahadsan tahay, jawaabtaada.
Waad salaaman tahay, waxaan ahay 29 sano jir, waxaan iibsaday suudh cirro dhuxul ah, waxaan ubaahan lahaa hanuun si aan u iibsado shaati iyo taye, mahadsanid ...
Waa salaaman tahay, waxaan cashada ku jiraa bil iyo badh waxaanan jecelahay inaan xidho shaati midabkiisu khamri yahay laakiin suudhkee ayaan isku daraa? (Ama midab kasta oo midabkiisu mugdi yahay) Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan xidho suud madow oo leh jaakad , laakiin inaad ku xirto shaati cad ayaa ka dhigaysa mid aad u fudud, shaar kale maxaa xiran karaa?
Waa salaaman tahay, waxaan u baahanahay inaan isku daro suud madaw oo leh shaati cawl, midabkee ayaa fiicnaan lahaa?
Ku jawaab jaime vilchez
Waxaan jeclaan lahaa inaan isku daro shaati buluug ah oo buluug ah oo leh xarig iyo jaakad madow. Ma noqon kartaa wax rasmi ah?
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa suud madow oo lagu daray shaati buluug khafiif ah iyo goon casaan ah? Mahadsanid
Jawaab Alejandro Barrera
Waxaan xiran karaa suud madow oo leh shaati cad oo buluug ah oo xariijimo leh oo cawlan ku leh quinceañera
Ku jawaab Papu
Salaan waan quusanahay. Suud madow oo leh xariiq toosan oo xariijimo leh iyo jaakad casaan ah. Waa maxay shaatiga, xarkaha iyo marada jeexista ah ee aan xirto
Hagaag, waxaan rabaa aqbalitaan waxaan hayaa surwaal madow iyo jaakad khafiif ah oo khafiif ah waxaan rabaa in aan ogaado shaatiga iyo xarka aniga igu habboon
Subax wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida laysugu daro suudh khafiif ah marka loo eego shaatiga iyo xarkaha, talo soo jeedinta la xiriirta dacwada hogaanka ee aan qaadanayo, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay
Jawaab Alejandro Aldana Heredia
TALOOYIN AAD U FIICAN. STYLE IYO SULDAAN.
Ku jawaab JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ
galab wanaagsan waxaan doonayay inaan ogaado sida laysugu daro waxyaabaha soo socda iyo xiriirada:
shaati ayaa la yimid surwaal madow.
shaati cad oo leh surwaal buluug ah
shaati madow oo leh surwaal madow.
shaati buluug cirka ah oo leh surwaal buluug ah
shaati kareem leh surwaal madow.
Shaati buluug faransiis ah oo leh surwaal buluug ah
BADDA ... dijo
Sayidyada ragga quruxda badan,
Runtii aad ayaan uga helay boggaaga waxaanan u malaynayaa inuu hayo macluumaad aad u muhiim ah si aanan "isugu dhicin" munaasabadahaas waaweyn;) Xilligan damaashaadka waxaan qorsheynayaa inaan siiyo ragga iyo ragga reerka xiriirro iyo marooyin. Xidhiidhku wuxuu noqon doonaa hal midab: casaan, buluug, guduud iwm, iwm oo leh xariiqyo kala-jajab ah, sidoo kale Miyaad siin kartaa maro gacmeedyo gebi ahaanba caddaan ah si ay u sameeyaan xirmada oo dhammaystiran? Jawaabo ayaan sugayaa.
Ku jawaab MAR ...
Wiilkaygu wuxuu ka qalin jabiyay Dhakhtarka. Waa maqaar bunni ah. Ma aqaan dharka loo baahan yahay qalin jebinta qalinjebinta iyo kabaha. Waa qalinjabinta subaxdii. Waa inaad xirataa jaakad ama bullaacad. Fadlan ii caawin?
Wiilkaygu dhakhtar buu ka qalin jabiyay. Iyadu waa midab madow oo ma aqaan waxa aan u xirto qalin jebinta, taas oo habka ay u tahay subaxdii. jaakad ma xirataa ??? iyo kabaha….? i caawi fadlan?
Waxaan xidhan doonaa suud buluug ah oo buluug ah oo leh shaati khamri ah, nooca iyo midabka xarkaha ku habboonaan doona
Jawaabta Ciise Gonzalez